अर्ल्ल्ट: विभिन्न वेबसाइटहरु लाई एक सम्पूर्ण वेबसाइट स्क्रैप गर्न को लागी
यी दिन, वेब स्क्रैप मैन्युअल रूपमा वा वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रमको सहयोगको साथ. वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू ल्याउन र आफ्नो पृष्ठहरू हेर्नका लागि डाउनलोड गर्न डाउनलोड गर्नुहोस्, र त्यसपछि हाइलाइट गरिएको डेटालाई गुणस्तरमा सम्झौता नगरी. यदि तपाईं सम्पूर्ण वेबसाइट स्क्रैप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले केही रणनीतिहरू अपनाउनु र सामग्री गुणस्तरको ख्याल राख्नु पर्छ.
मैनुअल स्क्रैपिंग: प्रतिलिपि पेस्ट विधि:
सम्पूर्ण वेबसाइट को स्क्रैप गर्न को लागि पहिलो र सबै भन्दा प्रसिद्ध तरीका मैनुअल स्क्रैपिंग छ।. तपाईंले मैन्युअल रूपमा वेब सामग्री प्रतिलिपि र टाँस्नु पर्छ र यसलाई विभिन्न कोटिहरूमा वर्गीकृत गर्नुपर्नेछ. यो विधि गैर प्रोग्रामरहरू, वेबमास्टरहरू र फ्र्यानल्यानरहरूले डेटा प्राप्त गर्न र केहि मिनेट भित्र वेब सामग्री चोरी गर्न प्रयोग गरिन्छ।. सामान्यतः, हैकरहरूले यस रणनीतिलाई लागू गर्दछ र म्यानुअल रूपमा सम्पूर्ण साइट वा ब्लगलाई स्क्रैप गर्न विभिन्न बूटहरू प्रयोग गर्छन्.
स्वचालित स्क्रैपिंग विधिहरु:
जाभास्क्रिप्ट संग HTML पार्सिंग गरिन्छ र रैखिक र नेस्टेड एचटीएमएल पृष्ठों को लक्ष्य. यसले तपाईंलाई दुई घन्टा भित्र सम्पूर्ण साइट स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ. यो सबभन्दा छिटो र सबभन्दा सही पाठ वा डाटा निष्कर्षण विधिहरू मध्ये एक हो जसले सम्पूर्ण आधारभूत र जटिल साइटहरू दुवैलाई स्क्रैप गर्न अनुमति दिन्छ.
डम वा कागजात ऑब्जेक्ट मोडेल एक पूर्ण प्रभावकारी वेबसाइट को लागी एक अन्य प्रभावी तरीका हो।. यो सामान्यतया एक्सएमएल फाइलहरूसँग सम्झौता गर्दछ र प्रोग्रामरहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ जुन तिनीहरूका संरचित डेटाको गहन विचारहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्. तपाईं DOM पार्सरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उपयोगी जानकारी समावेश नोड्स. XPath एक शक्तिशाली डोम पार्सर हो जसले तपाइँको लागि सम्पूर्ण वेबसाइट स्क्रैप गर्दछ र क्रोम, इन्टरनेट एक्सप्लोरर र मोजिलामा पूर्ण वेब ब्राउजरहरूसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ।. यस पद्धति संग स्क्रैप गरिएको वेबसाइटहरुमा वांछित परिणामहरु को लागि गतिशील सामाग्री हुनु पर्छ.
ऊर्ध्वाधर एकत्रीकरण ठूलो ब्रान्डहरु र आईटी कम्पनीहरु द्वारा पसंदीदा छ।. यो विधि विशिष्ट वेबसाईटहरू र ब्लगहरू लक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ र डेटा कटाउँछ, यसलाई क्लाउडमा भण्डारण गर्दछ. विशिष्ट ऊर्ध्वाधरका लागि डेटाको सिर्जना र निगरानी यो ठुलो विधिसँग गर्न सकिन्छ. त्यसैले तपाई स्क्रैप गरिएको डेटाको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता पर्दैन किनभने यो सधैं सुन्दर छ!
XPath वा XML Path भाषा क्वेरी भाषा हो जुन तपाईंको XML कागजातहरू र जटिल वेबसाइटहरू दुवै डेटा स्क्रैप गर्दछ।. जस्तै XML कागजातहरूसँग सम्झौता गर्न जटिल छ, XPath डेटा निकाल्न र यसको गुणस्तर कायम गर्ने एकमात्र तरिका हो. तपाईं यस प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ DOM सँग संयोजन र दुवै ब्लग र यात्रा वेबसाइटहरूबाट डेटा निकाल्नुहोस्.
तपाई Google Docs लाई शक्तिशाली स्क्रैपिंग उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण वेबसाइटहरु बाट डाटा हटाउन सक्नुहुन्छ।. यो पेशेवर र वेबसाइट मालिकों को बीच मा प्रसिद्ध छ. यो विधि उनका लागि उपयोगी छ जसले सम्पूर्ण साइट अथवा सेकेन्ड भित्र केहि पृष्ठहरु स्क्रैप गर्न खोज्छ. तपाईं डेटा ढाँचा विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाइँको स्क्रैप गरिएको डाटाको गुणस्तर जाँच गर्न सक्नुहुन्न.
यो नियमित अभिव्यक्ति मिल्दो विधि हो जुन फेथोन र पर्लमा सम्पूर्ण वेबसाइटहरू निकाल्न सक्दछ।. यो विधि प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरूको बीचमा प्रसिद्ध छ र जटिल ब्लगहरू र समाचार आउटलेटहरूबाट स्क्रैप जानकारी मद्दत गर्दछ Source .